ikhaya/umcebisi/I-adapter ye-M.2 SSD-ezona zi-5 zibalaseleyo ze-hard drive ezivalelweyo
Vangelis10. Fe bruwari 2021
Kwixesha elidlulileyo, ii-3,5 intshi (2,5 cm) zangaphandle iihard drive ezivalekileyo zazithandwa kakhulu. Namhlanje, nangona kunjalo Iadaptha ye-M.2 SSD Ngokungakumbi nangakumbi edumileyo. Ngokwahlukileyo kwimeko yakudala, iiadaptha zincinci kwaye zinokusetyenziswa ngaphandle kweyunithi yonikezelo lwamandla ongezelelweyo. Ungayiqhagamshela kwikhompyuter yakho okanye kwilaptop usebenzisa intambo ye-USB. Baninzi abavelisi kunye neemodeli ezahlukeneyo kwimarike. Akulula ukugcina umkhondo wezinto xa ukhetha indawo ebiyelweyo ye-M.2 SSD. Siza kukwazisa kwiiadaptha ezi-5 ze-SSD ezingcono kakhulu ze-M.2.
1 Iadaptha ye-M.2 SSD
3 Yeyiphi indawo efanelekileyo yokugcina imemori ye-M.2?
4 Faka i-M.2 SSD hard drive kwiadaptha
5 Ezona 5 zisebenza kakuhle zeM.2 SSD
6 1. M2 U r ELUTENG USB 3.0 indawo ebiyelweyo yedrive drive
7 2. YENZA I-USB 3.0
8 3.I-EasyULT M.2 iadaptha ye-USB (akukho ntambo iyafuneka)
9 4. Indawo ebiyelweyo yeFIDECO M.2 NVME SSD
10 5. I-NIMASO M.2 NVME SSD ebiyelweyo-i-PCIe i-USB 3.1
11 Iiadaptha ezingakumbi zeMD2 SSD
12 Iadaptha yePCIE
13 Iadaptha ye-SSD kwi-2.5 ″ SATA 3 ebiyelweyo
Iadaptha ye-M.2 SSD
M.2 SSD ebiyelweyo zithandwa kakhulu. Sebenzisa iikhompyuter ezininzi nangakumbi M.2 SSD iidrayivu ezinzima. Abathengisi bayabona ngakumbi nangakumbi ukuthengisa kwebar yememori encinci. enkosi M.2 SSD Adapter ungasebenzisa i M.2 SSD hard drive njengeendaba zangaphandle zokugcina sebenzisa. Ye I-latch ye-SSD unako njengoko i-hard drive yangaphandle inokudityaniswa nge-USB kwiWindows PC (idesktop okanye ilaptop), iApple Mac kunye / okanye iinkqubo zeLinux.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zonxibelelwano Iadaptha ye-M.2 SSD, i Indawo yokugcina iqhagamshelwe kwikhompyuter okanye ilaptop nge-USB, i-PCIe okanye i-SATA kwaye inokufikelela kwisantya ukuya kuthi ga Fikelela kwi-10 GBit / s.
Yeyiphi indawo efanelekileyo yokugcina imemori ye-M.2?
Zithini iikhrayitheriya xa uthenga enye M.2 SSDihadi diski Adapters ukucingela? Njengoko bekutshiwo ngaphambili, zininzi iimeko ezahlukeneyo zeMXXUMUMX zememori kwiimarike. Iindleko ezilungileyo Iadaptha ye-M.2 SSD ziphakathi kwe- € 8 kunye ne- € 40. Ukuba utyala imali kulwandiso lokugcina, akufuneki ugcine imali xa uthenga iadaptha elungileyo ye-M.2 SSD.
Ngaphambi kokuba uthenge, nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo iipropathi ezibalulekileyo:
Buchithwa njani ubushushu kakuhle? Imemori bar ikhulisa ubushushu ngexesha lomsebenzi kwaye kuya kufuneka ke iqatshelwe ukuba ngaba le ndlu yangaphandle inendawo yokupholisa nje okanye iyasebenza.
Loluphi uqhagamshelo olufunekayo? Ukuba ikhompyuter yakho inezibuko le-USB-C, kuya kufuneka uthenge iadaptha ye-M.2 SSD enezibuko le-USB-C okanye ubuncinci ibonelele nge-USB-A kwiadaptha ye-USB-C.
Thenga iadaptha elungileyo kwi-M2 hard drive yakho. Kukho iimodeli ezine-M-Key okanye iB-Key kubungakanani beesayizi 2230, 2242, 2260 kwaye 2280.
Faka i-M.2 SSD hard drive kwiadaptha
Ukulungiswa okanye ukufakwa kwe-M.2 I-SSD hard drive kwiadaptha ilula kakhulu. Ihard drive iqhotyoshelwe kwimeko enesikrelem esincinci.
Faka iadaptha ye-M.2 SSD
I-ELUTENG M2 SSD Enclosed USB 3.0 SATA Adapter 5 Gbps M.2 NGFF HDD Enclosure ixhasa iB Key kunye neB & M Key SATA SSD (2230/2242/2260/2280), ayixhasi i-PCIE / NVMe SSD, inkxaso ye-UASP
YENZA I-USB 3.0 UASP kwi-SATA NGFF M.2 2230/2242/2260/2280 Isitshixo B okanye i-B & M SSD SuperSpeed ​​Adapter, UkuBiyelwa kwangaphandle okungenantambo kwe-M.2 SATA-based SSD - Mnyama
I-FIDECO M.2 NVME SSD ebiyelweyo- i-PCIe i-USB 3.1, iGen 2, i-10Gbps, i-adapter yokufaka i-hard drive ye-USB kunye ne-caddy ye-M-Key okanye i-M + B Key yeNVME SSD 2230/2242/2260/2280 (isixhobo esingasimahla)
I-NIMASO M.2 NVME SSD ebiyelweyo-i-PCIe ye-USB 3.1 iGen 2 10Gbps, ene-USB C 3.1Gen 2 intambo, i-USB C hard drive adapta kunye ne-caddy ye-M-Key okanye i-M + B ye-NVME SSD 2230/2242/2260/2280 ukuya I-USB ixhasa i-UASP
Ezona 5 zisebenza kakuhle zeM.2 SSD
1. M2 U r ELUTENG USB 3.0 indawo ebiyelweyo yedrive drive
Izindlu ze-M2 SATA】 M.2 SATA iadaptha ixhasa zonke izitshixo ze-M.2 NGFF SATA SSD B / B + M, ***** Ayixhasi izitshixo ze-M okanye nayiphi na iPCIE / Nvme SSD *****. Qaphela: Nceda ufomathe i-SSD yakho entsha ngaphambi kokuba uyisebenzise, ​​kungenjalo ayinakuqatshelwa kwi-PC.
I-USB 3.0 hard drive ebiyelweyo-ixhasa ubukhulu be-SSD ezininzi, indawo ebiyelweyo ye-M2 SATA ixhasa i-M.2 SSD: 2230/2242/2260/2280 mm. AKAHAMBI nge-Samsung 950/951/960 SSD, KingSpec SSD, WD M2 Black SSD, Toshiba SSD. Izinto zeAluminiyam, zomelele ngakumbi, zikhaphukhaphu kwaye ziyaphatheka.
Iadaptha ye-ELUTENG M.2 SATA ixhasa zonke izitshixo ze-M.2 NGFF SATA SSD B / B + M. I-adaptha ye-M2 evela kwi-ELUTENG ixhasa i-SATA 2230/2242/2260/2280 SSD. Ye I-adaptha ye-ELUTENG M.2 SSD ayixhasi i-M Key PCIE / NVME SSD, kwaye ayixhasi i-Samsung 950/951/960 SSD, KingSpec SSD, KING POWER SSD, WD M2, Black SSD, JHK SSD, Toshiba SSD.
2. YENZA I-USB 3.0
Zilingane ngokugqibeleleyo nge-22 * 30mm, 22 * ​​42mm, 22 * ​​60mm, 22 * ​​80mm M.2 NGFF SATA SSD
Ubungakanani beMini, ukulungele ukuphatha, iplagi kunye nokudlala, ukuxhasa ukutshintsha okutshisayo
Zilingane ngokugqibeleleyo nge-22 * 30mm, 22 * ​​42mm, 22 * ​​60mm, 22 * ​​80mm M.2 NGFF SATA SSD. Ixhasa kuphela isitshixo se-SATA M.2 B / B & M SSD, kodwa ayixhasi i-SATA M.2 isitshixo se-M & PCIe SSD.
3.I-EasyULT M.2 iadaptha ye-USB (akukho ntambo iyafuneka)
M.2 SSD kwi-USB: M.2 ukuya kwi-USB 3.0 iadaptha, inokuhambisa iM2 SSD yakho kwi-USB 3.0 interface. Ixhasa kuphela isiseko esibonakalayo esisekwe kwi-SATA B kunye ne-B + M isitshixo se-M.2 SSD, isantya esiphezulu seM.2 NGFF SSD kwiadaptha ye-USB3.0, isisombululo esigqibeleleyo sokudluliswa kwedatha okanye ukhuphelo lwedatha! I-NVMe / M ye-SSD ephambili)
Ukufakwa ngokulula: akukho ntambo ye-USB ifunekayo. Akukho ngxaki ukulibala intambo ye-USB. Lula unxibelelwano! Ukufakwa ngokulula kwaye akukho mqhubi ufunekayo.
Ukuba awufuni ukusebenzisa iintambo, kuya kufuneka ujonge i-EasyULT M.2 iadaptha ye-USB. M.2 SSD kwi-USB: M.2 ukuya kwi-USB 3.0 iadaptha, inokuhambisa iM2 SSD yakho kwi-USB 3.0 interface. 22 * 30/42/60/80: Iyahambelana kuphela neM.2 SSD (m.2 isitshixo B, B + M uhlobo). I-SSD yediski esebenzayo: Inkxaso 22 * ​​30,22 * 42,22 * 60,22 * 80 NGFF (M.2) ujongano lwe-SSD hard disk. Inkxaso yeWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7/8/10, iLinux, iMac 10.0 OS, iPlagi kunye nokudlala, akukho mqhubi ufunekayo.
4. Indawo ebiyelweyo yeFIDECO M.2 NVME SSD
I-FIDECO M.2 NVME SATA SSD enclosure, PCIe USB 3.1, 10Gbps, Gen2 hard drive enclosure, i-adapter ye-hard drive ye-2230 2242 2260 2280 M.2 NVMe / SATA SSD esuka kwi-M-Key okanye i-M + B Key, inkxaso ye-UASP
Ulwakhiwo oluhlala ixesha elide I-aluminium egqibeleleyo engenakuqhekeka ikhusela kwizothuso kunye neentshukumo. Eli tyala lenzelwe ngokukodwa umoya ojikelezayo kumacala omabini ukuqinisekisa indawo yokusebenza epholileyo yokusebenza ngokukuko kunye nobomi obude kwi-solid-state drive yakho.
【Izindlu ze-SSD ezihambelanayo jikelele】 I-FIDECO SSD caddy iyahambelana ne-2230 2242 2260 2280 M.2 PCIe NVME SSD esuka kwi-M-Key okanye i-M + B Key kunye ne-M.2 SATA SSD esuka kwi-M + B Key, njenge-Samsung / Toshiba / i-Crucial / Kingston / Seagate / WD / Integral / PNY njl. Izindlu ze-SSD zixhasa iWindows, iMac OS kunye neLinux. Vele uxhume kwaye udlale ngaphandle kwabaqhubi bongezelelweyo okanye isoftware efunekayo.
−1,00 i-eur 31,99 yeEUR
Indlu ye-FIDECO M.2 SSD iyahambelana ne-PCIe NVME M-Key kunye neM + B Key SSD ene-2230/2242/2260/2280, o.k.t. Samsung / Toshiba / Crucial / Kingston / Seagate / WD / Integral / PNY njl. ixhasa iWindows / Mac, OS / Linux. Xhuma kwaye udlale ngaphandle kokuqhuba okanye isoftware. Nceda uqaphele ukuba i-M.2 SATA B-Key kunye ne-B + M ye-SSD ephambili ayixhaswanga.
5. I-NIMASO M.2 NVME SSD ebiyelweyo-i-PCIe i-USB 3.1
Indlu ye-SSD ehambelana kakhulu】 -NIMASO M.2 SSD izindlu ziyahambelana nePCIe NVME M-Key kunye neM + B Key SSD ene-2230/2242/2260/2280, o.k.t. Samsung / Toshiba / Crucial / Kingston / Seagate / WD / Integral / PNY njl. Ityala le-SSD lixhasa iiWindows / Mac, i-OS / i-Linux. Xhuma kwaye udlale ngaphandle kokuqhuba okanye isoftware. Nceda uqaphele ukuba i-M.2 SATA B-Key kunye ne-B + M ye-SSD ephambili ayixhaswanga. indlu yenziwe nge-ABS
【10 Gbps Super Fast PCIe Data Bridge】 -NIMASO Hard Drive Caddy ifaka i-USB 3.1, ibhulorho yedatha yeGen 2 PCIe ebonelela ngesantya sokudluliswa kwedatha ukuya kuthi ga kwi-10 Gb / s kwaye inikezela kabini ngenqanaba lokudluliselwa kwe-USB 3.1, iGen 1 (i-USB Ixhasa zombini i-BOT kunye ne-UASP, enika isantya sokufunda nokubhala ngokukhawuleza kune-USB 3.0 yemveli. I-chip ye-JMS3.1 eqhubela phambili iqinisekisa ukudluliswa okuzinzileyo nokukhawuleza kwedatha kunye nokwandisa ukusebenza.
Indlu yeNIMASO M.2 SSD iyahambelana nePCIe NVME M-Key kunye neM + B Key SSD ene-2230/2242/2260/2280, o.k.t. Samsung / Toshiba / Crucial / Kingston / Seagate / WD / Integral / PNY njl. ixhasa iWindows / Mac, OS / Linux. Xhuma kwaye udlale ngaphandle kokuqhuba okanye isoftware. Nceda uqaphele ukuba i-M.2 SATA B-Key kunye ne-B + M ye-SSD ephambili ayixhaswanga.
Iiadaptha ezingakumbi zeMD2 SSD
Kukho ezinye iadaptha umzekelo i-PCI Express. Oku kwenza ukuba kube nakho ukuba ne-MXMUMX SSD kwenye Isakhiwo sePCI ukudibanisa. Leadaptha isebenza kakuhle kakhulu kwiikhompyuter ezindala.
I-adapter ye-NVME i-PCIe x16 ene-heat sink, i-6amLifestyle M.2 NVME okanye i-AHCI SSD kwi-PCIE 3.0 | 4.0 ... Okwangoku akukho zibuyekezo 14,99 yeEUR Thenga it e-Amazon
I-EZDIY-FAB PCI Express M.2 SSD NGFF PCIe Card kwi-PCIe 3.0 x4 Adapter (Inkxaso yeM.2 PCIe 22110,2280, ... Okwangoku akukho zibuyekezo 15,59 yeEUR Thenga it e-Amazon
I-Sabrent NVMe M.2 SSD kwi-PCIe X16 / X8 / X4 khadi ene-aluminium sink sink (EC-PCIE) Okwangoku akukho zibuyekezo 14,99 yeEUR Thenga it e-Amazon
I-GLOTRENDS M.2 PCIe NVMe 4.0 / 3.0 iadaptha ene-0,12 intshi / 0,3 cm ubukhulu be-M.2 isinki yokufudumeza ye-M.2 PCIe ... Okwangoku akukho zibuyekezo 14,99 yeEUR Thenga it e-Amazon
I-EZDIY-FAB NVME PCIE iadaptha enesinki yokufudumeza, M.2 NVME SSD ukuya kwi-PCI Express iadaptha ngesinki yokufudumeza ... Okwangoku akukho zibuyekezo 13,99 yeEUR Thenga it e-Amazon
Iadaptha ye-SSD kwi-2.5 ″ SATA 3 ebiyelweyo
Kukho enye indlela yokudibanisa i-M.2 SSD yakho kwi-2,5 intshi ye-SATA III SSD. Nge-adaptha ye-SSD uguqula i-M.2 NGFF SSD kwi-2,5 intshi ye-SATA III SSD ene-6 Gbit / s.
I-Sabrent hard drive-izixhobo zezindlu ze-M.2 SSD ukuya kwi-2,5-intshi ye-SATA III ye-aluminium yezindlu ... Okwangoku akukho zibuyekezo 8,49 yeEUR Thenga it e-Amazon
ELUTENG M.2 SATA Adapter 22-Pin (7 + 15) SATA III NGFF M.2 SATA-based Key B / B + M for 2280 2260 2242 ... Okwangoku akukho zibuyekezo 8,49 yeEUR Thenga it e-Amazon
I-SSK Aluminium USB 3.1 ukuya kwi-M.2 NGFF SSD adaptha yezindlu, yangaphandle ye-SATA ... Okwangoku akukho zibuyekezo 13,59 yeEUR Thenga it e-Amazon
I-EasyULT M.2 iAdapter ye-USB (Akukho Cable ifunekayo), M.2 SSD kwi-USB 3.0 Adapter ixhasa i-NGFF SATA ... Okwangoku akukho zibuyekezo 14,99 yeEUR Thenga it e-Amazon
I-StarTech.com M.2 SATA SSD ukuya kwi-2.5 Intshi ye-SATA Adapter - M.2 NGFF kwi-SATA Converter - 7mm - i-Open-Frame ... 59 ukalisho 28,02 yeEUR Thenga it e-Amazon
Vavanya isantya sedrive drive phantsi kweWindows 10
I-E-learning: Kunye namaQela eMicrosoft okufundisa impumelelo
ICybercrime: nantsi indlela iMicrosoft esebenza ngayo
I-Antivirus kunye neVPN - indibaniselwano eyomeleleyo yeWindows
Kutheni kufuneka ukhethe isoftware ye-ERP
I-Squoosh: Isixhobo seGoogle sokucinezela imifanekiso kwi-intanethi
Yeyiphi ikhamera yedijithali efanelekileyo kum? Ushwankathelo
Kuqhotyoshelwe Feb 10, 2021
Kwixesha elidlulileyo, ii-3,5 intshi (2,5 cm) zangaphandle iihard drive ezivalekileyo zazithandwa kakhulu. Namhlanje, nangona kunjalo, iiadaptha zeMD6,35 SSD ziya zisanda ngokwanda. Ngokuchasene nemeko endala, iiadaptha zincinci kwaye zinokusetyenziswa ngaphandle kweyunithi eyongezelelweyo yokuhambisa umbane. Ungayiqhagamshela kwikhompyuter yakho okanye kwiLaptop usebenzisa intambo ye-USB. Kwimarike…